Banky iraisam-pirenena sy ny fanjakana : takina hampidina ny vidin-tsolika ireo mpaninjara | NewsMada
Banky iraisam-pirenena sy ny fanjakana : takina hampidina ny vidin-tsolika ireo mpaninjara
Fantatra fa nisy kabinetra frantsay tsy miankina iray, novatsin’ny Banky iraisam-pirenena ara-bola, nanadihady ny firafitry ny vidin-tsolika amidy amin’ny mpanjifa eto amintsika. Tsy navoaka ho fantatry ny besinimaro ny valin’ny fanadihadiana, saingy anisan’ny voalaza fa mihoatra lavitra amin’ny tokony ho izy ny tombombarotra alain’ireo kaompanian-tsolika eto Madagasikara. Na eo aza ny fanalalahana ny sehatry ny solika sy ny vidiny, mahita ity kabinetra frantsay ity fa ny vidiny farany ambony avoakan’ny Ofisy malagasy ho an’ny vokatra solika (OMH), ampiharin’ireo mpaninjara, ka manome tombondahiny azy ireo.
Manoloana ireo, nametraka fandaharam-potoana hifampidinihina mandritra ny volana maro ny governemanta, tohanan’ny Banky iraisam-pirenena, hamerenana hijerena ity vidin-tsolika ity.
Nandritra ny fihaonan’ny telo tonta, tsy neken’ireo kaompania efatra eto amintsika ny tarehimarika sy ny fehin-kevitra navoakan’ilay kabinetra frantsay nanao ny fanadihadiana. Nambara koa fa tsy noresahina dieny mialoha izy ireo. Manahy ireto mpaninjara efatra ireto fa hiverin-dalana ny Banky iraisam-pirenena, tsy hanaraka ny fanalalahana ny sehatry ny solika eto Madagasikara.
Tsy mahita vahaolana ny fitondrana
Anisan’ny ho voa mafy koa ny orinasa iray amin’ireo mpaninjara efatra ireo, satria novidin’ny orinasa frantsay iray, hatrany amin’ny 200 tapitrsia dolara. Mety ho talohan’ny nivarotana azy ny fanadihadian’ilay kabinetra frantsay, saingy voasoratra tany anatin’ny drafitrasa toekareny ny tahan’ny tombombarotra ambony indrindra voalaza etsy ambony. Ho sarotra ny ho tohin’ny fifampiraharahana. Rehefa tena zohina, tsy hitan’ny fitondrana ny vahaolana hampidinana ny vidin-tsolika, izay tsiahivina fa hiakatra koa ny hetra alainy amin’ny solika (TPP) manomboka amin’ny taona 2018. Midika izany fa tsy ho voafehy ny vidin-javatra amin’ny ankapobeny ary tsy azo antoka ny filazana fa nihena ho 72% ny fahantrana eto Madagasikara, raha 92% teo aloha.